Akụkọ - Kedu uru nke imetụ ihe niile n'otu n'otu
Ugbu a, e nwere ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ akpaaka, nke na-abụghị naanị na-enyere ndị mmadụ aka ime ka mmemme ahụ dị mfe ruo n'ókè ụfọdụ, kamakwa ịkwado ndị ọrụ ahụ. N'ime ụfọdụ mmemme akpaaka, ọ nwekwara ike ichedo nzuzo nke ndị ahịa ma zere nkwụsị nke ozi dị mkpa nke ndị ahịa. Aka igwe-na-otu igwe bụ ezigbo ihe atụ. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ya na nnukwu ebe ọha na eze. Onye editọ na-esonụ ga-achikota ya maka gị Ihe ọmụma dị mkpa banyere.
Imetu igwe niile aka n’eme ka anyi di nfe dika iji ekwentị nke aka anyi. Anyị agaghịzi achọ ihu ndị ọrụ ma tinye ngwanrọ dị mkpa na ihuenyo mmetụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ngwaahịa dị mma maka ọha na eze iji ya na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ, ya bụ, iji aka na njikwa n'ozuzu ya, nke na-eme ka ọrụ ndị mmadụ rụọ ọrụ nke ọma ma na-echekwa oge maka ndị mmadụ ime ihe ndị ọzọ. A na-ejikarị ya n'ụlọ ọgwụ, ụlọ ahịa na ụlọ akụ.
Gịnị bụ uru nke aka niile-na-otu?
1. Metụ igwe niile n’ime igwe anaghị akwado nkwado USB, kamakwa ọ na-akwado ọrụ aka ọdịde, nke na-ewetara ndị mmadụ mma.
2. Metụ isi pụrụ iche, nke enwere ike gbanwee dị ka ogo kwesịrị ekwesị.
3. Multi aka, nwere ike ịkwado mkpịsị aka iri na-emetụ n'otu oge.
4. The n'akuku bụ kemeghi, ikwe ka onye ọrụ ịgbanwe na uche, 30 Celsius ma ọ bụ 90 Celsius ma ọ bụ nnukwu elu n'akuku nwere ike gbanwee na
5. Resistive ihuenyo mmetụ, echegbula banyere ihuenyo mmetụ na-ezighi ezi, ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi positioned.
6. Aka agaghị agagharị kpamkpam, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere ọgaga, enwere ike gbanwee ya na akpaghị aka n'ọnọdụ ziri ezi.
7. Younwere ike iji mkpịsị aka gị metụ aka, kamakwa iji mkpịsị dị nro karịa mkpịsị aka gị.
8. Ọ nwere oke nkọwa na uche. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
9. Ndụ pịa nwere ike iru 1 nde ugboro, na-enweghị enyemaka nke oke na mgbasa ozi ndị ọzọ, ọ bụrụhaala mkpịsị aka nwere ike idozi nsogbu ahụ. Ọ na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na igwe.
Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na mgbe ị na-etinye aka na otu igwe?
1. Dika otutu akụkụ ihuenyo mmetuta bu nke iko, iko a di mfe igbutu aka, ya mere kwesiri ilezi anya puru iche mgbe etinyere ya, a ghakwara iyi gloves nchekwa dika o kwere mee.
2. Ihuenyo aka bụ nke iko na-emebi emebi, n'agbanyeghị agbanye ya ma ọ bụ tinye ya, ihe ndị ọzọ si mba ọzọ agaghị akụtu ma ọ bụ pịa ya.
3. A na-ekewa ihuenyo mmetụ aka n'akụkụ abụọ, otu bụ ihe nkiri ahụ, ya bụ, ihu mmetụ ahụ, nke ọzọ bụ azụ nke iko ahụ. Soro ntuziaka mgbe ị na wụnye.
4. N'ozuzu, enwere ndu na ihuenyo mmetụ. Mgbe ị nara ya, ị kwesịrị ị paya ntị ka ị zere ịdọrọ ndị na-eduga, na-eme ka kọntaktị na-adịghị mma ma ọ bụ na-emepe emepe.
5. A naghị ekwe ka ehulata efere mkwado nke eriri na-apụ apụ, nke dị mfe ime ka okirikiri sekit ahụ na ihe ndị ọzọ mepụtara.
6. N'agbanyeghị akụkụ nke akụkụ ahụ kwesịrị ijikwa nwayọ n'oge nrụnye iji zere ịkacha mmetụ ihuenyo mmetụ ahụ.
Aka igwe-in-one emeela ka ndụ anyị dị mma, mana anyị kwesịrị ịgbalị ike anyị niile ị oura ntị na ya mgbe anyị jiri ya. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, anyị kwesịrị ịkpọtụrụ ndị ọrụ na oge. Enwere ọtụtụ nchịkọta gbasara imetụ igwe niile aka. Enwere m olileanya na anyị nwere ike inyere gị aka!